अमेरिकी वैज्ञानिककै अनुसन्धान- काेराेना चीनमा देखिनुभन्दा पहिले अमेरिकामा फैलिसकेकाे थियाे ! – Koshidaily
मुख्य पृष्ठयौन/स्वास्थ्यअमेरिकी वैज्ञानिककै अनुसन्धान- काेराेना चीनमा देखिनुभन्दा पहिले अमेरिकामा फैलिसकेकाे थियाे !
अमेरिकी वैज्ञानिककै अनुसन्धान- काेराेना चीनमा देखिनुभन्दा पहिले अमेरिकामा फैलिसकेकाे थियाे !
एजेन्सी, मंसिर । करिब एक वर्षअघि काेराेना भाइरस (कोभिड-१९) चीनको वुहानबाट फैलिएकाे थियाे । अहिलेसम्म विश्‍वले चीनबाटै कोरोना संक्रमण फैलिएको निचोड निकालिरहेको छ । तर वैज्ञानिकहरूले गरेको नयाँ अनुसन्धानले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) चीनमाभन्दा अमेरिकामा अगाडि फैलिसकेको पत्ता लागेकाे छ ।
कुनै पनि व्यक्तिको शरीरमा एन्टीबडी मिल्नुको मतलब हो, त्यो मानिस कुनै पनि समयमा कोरोना संक्रमित भएको थियो। र, कोरोना भएपछि उसको रोग प्रतिरोधक प्रणालीले भाइरससँग लड्न एन्टी बनाइसकेको छ । अमेरिकामा व्यापकरुपमा भाइरस संक्रमण फेब्रुअरी अन्तिमबाट फैलिएको थियो । अनुसन्धनकर्ताहरूले चीनमा भन्दा पहिले नै शरीरमा एन्टीबडी बनिसकेका ती अमेरिकनहरु आफ्नै देशमा संक्रमित भए या विदेशबाट संक्रमित भएर आए भन्‍ने निष्कर्षमा अझै पुगिसकेका छैनन् ।
अहिलेसम्म महामारीको केन्द्र वुहानस्थित जनावरको बजारलाई मानिन्दै आएको छ । एकै पटक कयौँ मानिसमा संक्रमण देखिएको हुनाले अहिलेसम्म यही बजारलाई कोरोनाको केन्द्र भनिन्छ। तर एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कोरोना भाइरस फैलिन सुरु भएको मिति अझै पनि वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। चीनको वुहानमा डाक्टरहरुले गरेको एक अध्ययन अनुसार यहाँ कोरोनाको पहिलो मामिला डिसेम्बर पहिलो तारिखमा पत्ता लागेको थियो । बीबीसीकाे सहयाेगमा